I-oda - I-Word Foundation • Izincwadi, Umsindo, Amamagazini, nokuningi
Izincwadi, ama-Ebook kanye nomsindo
Izincwadi ze-Percival zitholakala nge-elekthronikhi ngeyethu Ikhasi le-Ebooks.
Thinking and Destiny I-Softcover
Thinking and Destiny oluqinile
Thinking and Destiny I-Audiobook (i-USB Flash Drayivu, ifomethi ye-MP3)
Onke amalungu e-The Word Foundation, kungakhathalekile ukuthi yiliphi izinga lokusekelwa olikhethayo, azokwamukela umagazini wethu wamathathu ngekota, iZwi, kanye nesaphulelo esingu-40% ezincwadini zePercival. Uma ufisa ukuba yilungu bese uthatha isaphulelo ku-oda yakho, noma uma usuyilungu futhi ufuna ukufaka isaphulelo, sicela Xhumana nathi ukubeka i-oda lakho ngesheke, ngocingo noma ngefeksi.
Ubulungu Abaphezulu noma Abafundi
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-70, iThe Word Foundation izibophezele ekwenzeni imisebenzi kaHarold W. Percival itholakale kubo bonke abafuna iQiniso. Umnikelo wakho owaziswa kakhulu uzosiza ukukhulisa ukufinyelela kwethu futhi uxhase izindawo eziningi ezibalulekile zomsebenzi wethu, njengokugcina izincwadi ziphrintiwe, ukushicilelwa nge-elekhthronikhi, ukukhangisa, kanye nokunikeza izincwadi zamahhala iziboshwa ezisejele, imitapo yolwazi, nabantu abangakwazi ukuzikhokhela.
Sisekele Kwezinye Izindlela
Ngiyacela Xhumana nathi mayelana:
Ukwenza isipho sesikhwama sonyaka
Ukwenza isipho semasheya noma ukuphepha
Ukuhlelela ukuphindaphindwa kweminikelo yanyanga zonke
Ukukhumbula iZwi Isisekelo ngentando yakho